Ujeeddada Mudaharaad dadweyne Gadoodsani la hortageeen Xafiiska Badhasaabka Maroodijeex iyo Jawaabta Maamulka gobolku ka Bixiyey | Burco Media
Ujeeddada Mudaharaad dadweyne Gadoodsani la hortageeen Xafiiska Badhasaabka Maroodijeex iyo Jawaabta Maamulka gobolku ka Bixiyey
Hargeysa,(BM)- Dadweyne gadoodsan oo cabasho maamul-xumo ah ka tabanayey Maamulka gobolka Maroodijeex, ayaa shalay mudaharaad salmi ah ka hor-sameeyey Xafiiska badhasaabka gobolka ee magaalada Hargeysa.
Dadweynahan oo u badnaa haweenka qoysas danyar ah oo ku dhaqan xaafadda Axmed Dhagax ee magaalada Hargeysa, ayaa maamulka gobolka u gudbiyey cabasho la xidhiidha qaabkii loo maamulay Raashin mucaawimo ah oo dawladda Turkigu dhowaan ugu deeqday Somaliland isla markaana loo qaybiyey gobollada iyo degmooyinka dalka, kaas oo qaybo badan oo bulshada dalka ku nool si weyn uga cawdeen nidaamkii loo maamulay.
Haseyeeshee cabashada dadweynaha ee la xidhiidha qaabka loo maamulay qaybinta raashinkaas ee ay tirsanayaan waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay Xoghayaha Gobolka Maroodijeex Mawliid Ciise Cabdi oo sheegay in sidii loogu talo-galay loogu qaybiyey raashinkaas.
Dadweynaha cabashada la hortagay xafiiska maamulka gobolka Maroodijeex oo wariye ka tirsan Wargeyska Ogaal qaarkood la kulmay, waxna ka weydiiyey cabashadooda, ayaa ku dooday in sifo sharciga baalmarsan loo maamulay qaybintii raashinkaas.
“Anagu waxaanu nahay dadkii Xaafada Axmed Dhagax ee kaadhadhka loo qaybiyey, taas oo ay nagu yidhaahdeen Masuuiyiinta Xafiisa Badhasaabka raashinkii mucaawimada, markaas saaka (shalay) ayaanu oganay in meeshiiba wax raashin ah oolin oo laga qaaday. Anagu waxaanu ugu nimi laba gaadhi ayey ahaayeen markaa anaga waxa nalagu yidhi Saaka salaaddii ayaa la keenay, marka anaguna waanu soo guura galnay. Waxaana kaadhadhka na siiye Guddiga Axmed dhagax oo markii danbana waxa nalagu yidhi wax raashina idinama hayno oo wixiiba waa la qaatay,” sidaas waxa tidhi Hoodo Sayid oo ka mid ahaa Dadkii Cabashada la hortagay Xafiiska Badhasaabka Gobalka Maroodi-jeex.
Xoghayaha Gobolka Maroodi-jeex Mawliid Ciise Cabdi oo u xil-saarnaa qaybinta raashinka, ayaa ku dooday inay qaybiyeen raashinka mucaawimada ah oo tiradiisu dhammayd shan boqol oo kiish oo is-kugu jia bariis iyo daqiiq, waxaanu yidhi, “Waxaanu qaybinay raashin mucaawimo ah oo qayb ka ahaa raashinkii dalka Turkiga barigii dhawayd inooga yimi, kaas oo ay iska lahayd Degmada Axmed dhagax, waxaanu uu ahaa shan boqol oo kiish oo is-kugu jira Bariis iyo Daqiiq. Runtii raashinkaas badankiisu wuu baxay, maantana waxaanu bixinay shan boqol oo Qoys oo aanu ugu qaybinnay Iskuulka Dayib-guray. Arrintaas si wacan ayaanu u maamulnay anigoo ka masuul ahaan u xil sarnaa Gobalka, waxaana ila qaybinayey xildhibaan Nac-nac iyo Xildhibaan Obsiiye, waxaana raashinkaas la siiyey shan boqol oo qoys oo kaadhadhkii haystay. Labada Degmo ee Axmed dhagax iyo 31 May ayay ka tirsanayeen. Xaafadahaas waxa noo jooga Guddiyadii nabad-galyada oo nooga wakiil ahaa, markaa dadkii jilicsanaa ee kala aha Agoontii, Curyankii iyo danyartiiba, iyaga ayaa noo soo xulay,”ayuu yidhi Xoghaye Mawliid.
Xoghaya gobolka Maroodijeex waxa uu ka hadlay dadka cabashada la hortagay xafiiska gobolka, waxaanu yidhi, “Ddkaa hor yimi Xafiiska Gobalka waan u baxay, haddana Nin ka soo jeeda Xaafada Axmed dhagax ayaan ahay oo dadka waan kala garanayey, dadka halkan yimi waxa ku jiray dadkii aanu kaadhadhka siinay saddex qof oo kaliya. Dadka kalena badankoodu dad kaadhadh haystay may ahayn, markaa raashinkii Mucaawimada ahaa sidaas cadaalada ah ayuu nooa baxay.”
Dadka cabashada la hortagay maamulka gobolka oo dhammaantood sitay kaadhadh ay sheegeen in loogu qaybiyey bixinta raashinka, ayaa xoghayaha Gobolka Maroodijeex ku sheegay inaanay haysan kaadhadh maamulka gobolku bixiyey balse ay haystaan qaar wasaaradda dib-u-dejintu siisay. “Dadkaasi waxay ka cabanayeen waxay haysteen kaadhadh hore oo Wasaarada dib-u-dajintu u qaybisay, markaa kaadhadhkaasi may ahayn qaar anagu aanu bixinay. Dadkana qaar ayaa la soo khalday oo waxa la yidhi idinkuna waad ku jirteen raashinkaas markii aanu u tagnay ee aan ku idhi kala barnaamij ayaynu ahayn way qanceen,” ayuu yidhi Xoghayaha Gobolka Maroodijeex Mawliid Ciise.